यौनेच्छा किन हुन्छ ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
प्रश्न : म २२ वर्षको भएँ । अहिलेसम्म मैले यौनसम्पर्क गरेको छैन । कहिलेकाहीं बाहिर यौनसम्पर्क राखूजस्तो पनि लाग्छ, तर यौनरोग सर्ला कि भन्ने डर लाग्छ । त्यही भएर अहिलेसम्म बाहिर यौनसम्पर्कको चाहना पूरा गर्न मैले हस्तमैथुन गर्ने गरेको छु । म दैनिकुजसो हस्तमैथुन गर्ने गर्छु । यसले कतै भविष्यमा कुनै समस्या त ल्याउँदैन ?
एक त इन्डोक्राइन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले यौनेच्छा सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणालीका साथमा स्नायु प्रणाली पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यौनेच्छा जाग्ने वा त्यसको व्यग्रतामा एन्ड्रोजन (टेस्टस्टेरोन) रागरसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्कातिर यौन सन्देशहरू मस्तिष्कसम्म पुर्‍याउन इन्द्रियहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् र मस्तिष्कले नै त्यसलाई अथ्र्याउँछ । यौन परिकल्पनामा पनि मस्तिष्ककै हात हुन्छ । यौनेच्छा अनि यौनक्रियामा मस्तिष्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मस्तिष्कलाई सबैभन्दा ठूलो यौनअङ्ग पनि भनिन्छ ।
हस्तमैथुनले के असर गर्ला ?
तपाईंलाई थाहै होला, यौनआनन्द प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये यौनअङ्गको घर्षण प्रमुख हो । यौनसम्पर्क गर्दा दुई व्यक्तिका यौनाङ्ग एक–आपसमा घर्षण गराइन्छ । मानिसले आफ्नो यौनाङ्गको घर्षण अरू कसैको यौनाङ्गमा गराए मात्र यौनआनन्द प्राप्त गर्ने होइन । हस्तमैथुन एउटा यस्तो उपाय हो जसबाट यौनसम्पर्कबाहेक अन्य तरिकाबाटै आफ्नो यौनाङ्गको घर्षण गराएर यौनआनन्द तथा यौन चरमसुख पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । सिद्वान्तत: यौनसम्पर्क तथा हस्तमैथुन गर्दा यौनाङ्गको घर्षणबाट यौनआनन्द प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र उस्तै हो । त्यसैले यौनसम्पर्क गर्दा हानि हुन्छ र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुँदैन भन्न मिल्दैन ।
सामान्यत: हस्तमैथुन आफैंले खराबी नगरे पनि यसैसँग जोडिएर आउने हीनताबोध वा दोषीपनले भने समस्या उत्पन्न गराएको हुन्छ । त्यसैले मनबाट नकारात्मक धारणा निकाल्न सक्नुपर्छ ।
हस्तमैथुनका फाइदा के होलान् ?